TRACTOR "URALETS-220": SIFOOYINKA IYO TAYADA - MISHIINADA GAARKA AH
Minitractors ee nooca Uralets yihiin traktors yar oo soo saaray China iyo Russia.
Qalabka noocan ah waxaa loo isticmaalaa degmooyinka iyo beeraha si loogu isticmaalo guriga iyo gaadiidka alaabta.
Gawaarida yaryar "Uralets-220" waa qaabka ugu sareeya ee xawaaraha (waxaa sidoo kale jira tareeno yaryar "Uralets-160" iyo "Uralets-180"). Kajirinta awoodda mootada ee 22 koronto, taas oo noqon doonta mid aad u faa'iido leh markaad ku wadato dhulka culus. By habka, tractor mini this si fudud u haboon karaa garaashka kasta.
Waa muhiim! Cunto yar oo yar, Uraletsku waa mid sahlan, taas oo macnaheedu yahay in si fudud loo dhaafo meelo kooban, sida beerta, aqalka dhirta lagu koriyo, iyo hangar yar.
Noocyada qalabka gawaarida
Shaqada ugu badan ee "Ural" waa gaadiidka xamuulka. Uralets-220 kama baqanayo waddada dibedda iyo culeyska cimilada.
Goobta shaqada, laba-iyo-saddexda xayawaanka carrada ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa. Waxaa suurtagal ah in lagu soo lifaaqo seeders si loo yareeyo minitraktor, si kastaba ha ahaatee had iyo jeer waa lagama maarmaan in la xusuusto in noocyadan loogu talagalay shaqooyinka yaryar. "Uralets-220" waxay si fiican u kantaroolayaan hawlaha beeraha baradhada. Sidaa daraadeed, isku darka taranka, baradho baraf ah, qashin iyo walxaha kale ee lagama maarmaanka ah ayaa la geyn karaa xayawaanka. Tractor "Uralets" - kaaliyaha wanaagsan ee diyaarinta quudinta, ie, geedka cawska. Waxay u rogi kartaa 360 darajo meel, taas oo macnaheedu yahay in ay leefin karto meelaha ugu caansan.
Ma taqaanaa? Traktor ugu weynaa waxaa loo sameeyay hal nuqul sanadkii 1977-kii Mareykanka. Cabbirkiisu waa 8.2 × 6 × 4.2 m, iyo awood - 900 karoon.
Soo-saaraha Uralets-220 minitraktor ayaa waxa uu soo saaray astaamaha farsamada soo socda:
Qaabka mashiinka TY 295
Qiimaynta tamarta 22 hp
Isticmaalka shidaalka 259 g / kW * saacad
Xawaaraha wareegga ah ee PTO 540 rpm
Sanduuq adag 6/2 (hore / gadaal)
Xawaaraha max 27.35 km / h
Gawaarida bilowga bilowga korantada
Xayeysi tusmo 960/990 mm
Miisaanka 960 kg
Ma taqaanaa? Traktor ugu yar wuxuu ku yaal matxafka Yerevan. Waxay u egtahay sidii faro iyo waxa loo samayn karaa dhaqdhaqaaq.
Fursadaha waxqabadka madadaalo ee dacha
Dhibicaha waxsoosaarka beeraha wuxuu leeyahay fursado badan oo beeraha iyo dhismaha. Thanks to qalabka korontada, Uralets waxay:
dhulka ku dheji;
dhirta iyo baradhada goosashada;
nadiifi barafka iyo qashinka.
Wax badan ka baro fursadaha iyo faa'iidooyinka isticmaalka tareenada MTZ-892, MTZ-1221, MTZ-80, T-150, T-25, Kirovets K-700, Kirovets K-9000 ee beeraha.
"Uralets-220": faa'iido iyo faa'iido daro
Qorista faa'iidooyinka xayawaanka, ugu horreyntii waa lagama maarmaan. awood sare, marka la barbar dhigo moodyadii hore ("Ural" 160 iyo 180). Waxaa suurtogal ah in lagu rakibo unugyada kor u qaada marxaladaha codsigooda. Cabbirka yaryar ee minitraktor wuxuu leeyahay saameyn togan oo ku saabsan suugaanteeda meelo kala duwan. Ma jiraan wax qalabka elektarooniga ah ee Uralts, sidaas darteed hawlgalka waa mid sahlan oo cad.
Waa muhiim! Ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa maqnaanshaha cabsida, sababtoo ah waxay xaddidaysaa cagajuglaha cimilada xun.
Miisaanka ugu sarreeya ee Uralets ay kor u qaadi karto waa 450 kg, miisaankuna waa 960 kg, taas oo adkeyneysa in lala shaqeeyo baaldi xayawaan. Si kastaba ha noqotee, faa'iido darrada ka jirta Ural-220-ta yar-yar ee xamuulka ah waxaa lagu magdhabaa qiimaha iyo sifooyinka farsamada, sababtoo ah waxay ka kharash yar tahay tareenada galbeedka ka samaysan oo leh isla shaqooyinkaas.